FPL week-7 final result – We love Steempress
Home/fpl/lang/myanmar/steem/steempress/FPL week-7 final result
ဒီအပတ်မှာကတော့ ၄၅ မှတ်ပဲ ရလိုက်ပါတယ်။ ကို @aggamun တောင်မှ ကျွန်တော့်ကို ကျော်တက်သွားပါပြီ။ ဆုရဖို့ကလဲ မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ပါဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုယ် သဘောမကျလို့ လဲ လိုက်တဲ့သူတွေက ခြေစွမ်း လက်စွမ်းတွေ ပြနေတာပါပဲ။ ဂိုးသမား တစ်ယောက်လဲ လိုက်ပါတယ်။ လဲလိုက်တဲသူက လက်စွမ်းပြနေပြီး ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိတဲ့သူက နာပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကံတရားရတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းတာပါ။ အဂွဲရိုးက ၂၄ မိနစ်ပဲ ကစားပြီးတော့ လူစားအလဲ ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဂိုးလဲ သွင်းမသွးပါဘူး။ တစ်ဂိုး ဖန်တီးပေးသွားလို့ တော်သေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အေဘရာဟမ်ကလဲ ခြေမပေါ်ပါဘူး။ ချဲလ်ဆီးက နှစ်ဂိုးရပေမဲ့ သူက တစ်ဂိုးမှ သွင်းမသွားပါဘူး။
Richarlison နဲ့ Digne တို့ကတော့လဲ ဖို့စဉ်းစားပါသေးတယ်။ မလဲ ဖြစ်လိုက်တာကတော့ ကျွန်တော့်အပြစ်ပါပဲ။ အရင်တစ်ခါ Norwich နဲ့ Man City ပွဲကလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို မလဲပဲ ထားလိုက်တာ မှားသွားပါတယ်။ Vestergaard ကတော့လဲ ခြေစွမ်းပျောက်နေပါတယ်။ သူဆုံနေတာကလဲ spurs နဲ့ဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့လေ။ ပိုပြီးဆိုးသွားတာက ဂိုးသမားက နာနေတာပါပဲ။ အရန်ထားထားတဲ့ coady ကတော့ ခြေစွမ်းပြသွားပါတယ်။
ဒီအပတ်မှာကတော့ အသင်းကြီး အချင်းချင်း ပြန်ဆုံတာ မရှိပါဘူး။ မန်စီးတီးနဲ့ wolves မှာကတော့ မန်စီးတီးပဲ စားသွားမယ် ထင်ပါတယ်။ အသင်းကြီးတွေ အကုန်ရလဒ် ကောင်းမယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ spurs ကတော့ လီဗာပူးနဲ့ လီဆက်စတာကတော့ အနည်းငယ် စောင့်ကြည့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ လီဆက်စတာက ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ငါးဂိုးတောင်သွင်းထားတာဆိုတော့ လီဗာပူးရဲ့ ပွဲတိုင်းနိုင်တဲ့ စံချိန်ကို ရပ်တန့် ပစ်နိုင်မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က လီဗာပူး က တစ်ဂိုးပဲ ရလိုက်ပါတယ်။ ဂိုးသွင်းအား ကျသွားပြီလား? ဒီတစ်ပတ်မှာရော ခြေစွမ်းဆက်ကျဦးမှာလား?
Posted in fpl, lang, myanmar, steem, steempressTagged neoxian, sportstalk, steemace
ကို @aggamun ရေ။ ကျွန်တော်တော့ Gold II ရောက်ပ​ြီဗျ။ ဒီရာသီမှာ Gold II တော့ မရောက်နိုင်ဘူး ထင်ထားတာ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်မီကလေးပဲ ရောက်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးနိုင်တဲ့ battle ကိုတော့ ကြွားလိုက်ပါဦးမယ်။ […]
ဒီနေ့မှာတော့ Silver II ကို ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီ အစပိုင်းဆိုတော့ တိုက်ရတာ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ Silver II ကို ရောက်ဖို့ကို DEC caprture rate အတော်ကို အကျခံပြီးတော့မှ ရောက်ပါတယ်။ […]